Azụ anụ ọkụkọ na aka aka ha, ụdị nke aviaries, foto - Ugbo ala ugbo - 2020
Ha na aka ha
Ihe ndabere nke ọkụkọ ozuzu na - eme nke ọma - dị mma maka ọdịnaya ha. Maka nke a, ọ dị oké mkpa ịkwadebe pen, ọrụ bụ isi bụ ọ bụghị nanị ichekwa ọnụọgụ nke nnụnụ, kamakwa ọganihu n'ọtụtụ arụpụta ihe. Otú ọ dị, iji mezie ya, ị ghaghị ibu ụzọ mụta ihe ndị dị mkpa.
Anyị na-arụ ụlọ corral
Kedu ihe mere m ji chọọ onye ọ bụla
Taa, ọkụkọ ozuzu bụ ụdị ego a na-akwụkarị maka ndị nwere obere ala. Tụkwasị na nke ahụ, nlekọta nke nnụnụ ga-enye gị ohere ịnweta nsen na anụ anụ maka ezinụlọ gị. Ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ maara na ụlọ dị iche iche dị mkpa maka ọrụ ugbo kwesịrị ekwesị. Tụlee ihe mere ị ji chọọ ụdị dị otú ahụ:
Na mgbakwunye na nri, ọkụkọ kwesịrị ịma ahịhịa na igwu nsị site n'ala.
Iji chebe megide ndị na-eri anụ.
Iji nye ohere maka ije.
Na-ekpuchi nnụnụ pụọ na ihu igwe ojoo mgbe ị na-eje ije.
Ya mere, ohere a zoro ezo - nke a bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ. Iji belata ụgwọ, ị nwere ike ime ya n'onwe gị.
Ị ma? A na-ebu ọkụkọ naanị ọkụ ọkụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na oge maka usoro a abịaworị, ọ ka ga-echere ụbọchị ma ọ bụ ọkụ ga-abịa.
Dabere na njedebe na njedebe, aviary nwere ike ịnọ ma ọ bụ na-agagharị. Onye ọ bụla n'ime ha nwere uru na ọghọm ya. I kwesiri imata onwe gi na ha site na ikpebi ime otu ihe dika gi na ebe gi.
Mụta otu esi eji aka gị mee nkịta nkịta.
Ụdị a kwesịrị ekwesị iji mee ihe na-adịgide adịgide. Dabere n'ụdị nke mbụ nwere ike ịnweta ụdị dị iche iche nke nnụnụ. Ihe dị mkpa bụ nhazi nke ihe owuwu ahụ, ebe dị ala bụ enweghị ike ịgbanwe ebe ntinye ya. Azụ ụgbọ elu
Nke a bụ ezigbo maka obere ìgwè anụ ọkụkọ ma ọ bụ ịzụlite ngwaahịa ndị na-eto eto, ọ bụkwa ihe dị mma nke ogige a na-ebugharị. N'ihi ọnụnọ nke wiil ndị ahụ, ụzọ ya dị mfe karịa nke a na-ebugharị. Ihe kachasị mma bụ kọntaktị kpọmkwem na ahihia. Mobile aviary
A na-ewu ụlọ isi na Paddock. N'ụlọ dị otú ahụ, nnụnụ nwere ike ịga ije n'afọ niile. Ebe a ga - eje ije nwere ike ime naanị site n'enyemaka nke ngere dị ka okporo. Otú ọ dị, mgbe ị rụworo ụlọ, ị ga-ezere ọtụtụ nsogbu ndị metụtara ịdị ọcha, ebe ọ bụ na ụdị dị otú a ga-echebe ebe ahụ site na mmiri ozuzo na nsị.
Ọ dị mkpa! A na-atụ aro corral na-arụ ọrụ iji wuo n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Nhazi a ga - enye ụmụ nnụnụ ohere inweta vitamin D, ma ụtụtụ adịghị anwụ ọkụ maka ịga ije.
Maka ịmepụta pen akwụkwọ ị ga - achọ:
Gụkwa maka otu esi eme ka ọkụkọ nri maka ọkụkọ, wuo ma kwadebe ọkụkọ ọkụkọ, yana ịkwanye ọkụ, ụlọ onu na akwu.
Tụlee otu esi eme onwe gị ka ọ bụrụ onye na-anọchi onwe ya:
Ntọala. N'ebe nsọtụ nke oghere nke ụlọ na-eme n'ọdịnihu, a ga-ewepụ ihe dị n'ime 30 cm nke ụwa. Mgbe ahụ, fesaa ebe ahụ na udu mmiri, obere pebbles ma ọ bụ ájá. Okpokoro nke oyi akwa a bụ 10 cm. A na-emepụta ụdị ihe a na tren nke e mepụtara, nke a na-etinye ya na simenti. Ọrụ ndị a ga - eme naanị mgbe ụbọchị iri abụọ na abụọ gasịrị. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ụdọ a gwuru na-emepụta pen na-agbanye n'ala, kpuchie ya na onye na-ahụrụ ihe. Nke a bụ nhọrọ a na-anabata, ọ na-adịrị ego ma dị mfe ịrụ ọrụ, ma ọnụnọ ntọala ahụ ga-enye ohere iji kpuchido ọkụkọ site na ịbanye n'ime anụ ndị nwere ike igwu n'okpuru nsu.
Paul Akụkụ a nke ihe owuwu ahụ bụ ihe okike (mbadamba osisi ga-abụ nke a mịrị amị) ma ọ bụ ha na-agha mkpụrụ n'ala. Nhọrọ nke abụọ bụ nsogbu karị, dịka ahihia ga-egbutu, na ọdịda iji wepụ ihe ndị fọdụrụ na akọrọ.
Mgbidi. Ebe a họọrọ nke dị nso na ọkụkọ coop na-ejikọta ya na njikọ njikọta nke a na-etinye na nkwado site na osisi ntụ. Nke mere na ọkụkọ anaghị agba ọsọ, ebe ọ na-eme ọwara, ọ na-atụ aro ka ị lie oghere 20 cm n'okpuru ala ma ọ bụ ka mee ntọala.
Video: Chicken ogige
Ọ bụrụ na ịchọrọ ikpuchi usoro ahụ nwere ụlọ, mgbe ahụ, ọkpọkọ profaịlụ ga-adabara dị ka etiti:
Na ebe a chọrọ, ha na-adaba na ọkpọkọ kwa mita omimi (oghere dị n'agbata racks bụ 2 mita). Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mee ka otu n'ime ọdịdị dị n'ihu n'ọdịdị 50 n 'elu iji hụ na mmiri na-agbapụta.
Mmiri ahụ jupụtara na apịtị ma wụsa ya na ihe.
N'elu ọkpọkọ ahụ, a na-eji ihe nkedo ahụ emepụta elu ahụ dị elu, na 20 cm ala - ụda ala. N'etiti ha ka a na-agbasapụ ụda nke dị na 45 °.
Ihe nkwụsị. Maka nchikọta ha, a na-ejikarị eriri nke eriri dị n'akụkụ nke ọ bụla na-ekpuchi ihe dịka 60-70 cm nke eriri elu. A na-ekpuchi klas na kposara.
Ahọrọ maka ihe ụlọ (slate ma ọ bụ ndị ọzọ) na-agbakwunye ya.
Video: ije maka ọkụkọ na mkpuchi
Ọ dị mkpa! Maka nnụnụ iri, ebe ị ga-eje ije ga-abụ ma ọ dịkarịa ala 2x2 m. A ga-echebara nke a n'uche mgbe ị na-ekpebi na ọ ga-ewu ụlọ.
N'adịghị ka onye na-anọ ọdụ, a na-eme pen dị otú ahụ maka oge ọkụ nke afọ ma ọ bụ jiri mee ihe maka ịzụlite ngwaahịa ndị na-eto eto. Mgbe ikuku ikuku dị ntakịrị, ụmụ nnụnụ agaghị enwe ahụ iru ala.
Mụta otu esi echekwa ọkụkọ n'oge oyi.
Maka imepụta mkpanaka mkpanaka ga-achọ ịzụta ihe ndị na-esonụ:
mbadamba nke 30 99100;
Ogwe nke 20yi40 mm;
mbọ, ọrụ nkà na-arụ na mgbidi.
Ị ma? E nwere nsen na yolks abụọ, ma ọkụkọ ejima na ha ka ga-arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ọkụkọ abụọ ahụ ga-anọchi anya n'otu shea, ha apụghị ịmalite.
Tụlee otú ị ga-esi eji aka gị mee pen pen na-arụ ọrụ mkpịsị aka:
Na-emepụta mgbidi n'akụkụ. Site na mbadamba a na-anakọta mgbidi n'akụkụ nke ọbịbịa n'ọdịnihu. Maka ndị na-adị mkpumkpu, a na-egbutu akụkụ ndị dị n'elu n'otu akụkụ nke ogo 60, na akụkụ dị ala n'ogo nke ogo 30. Mgbe ha jikọtara ha, a ghaghị inweta nkwụsịtụ ya, ma a ga-ejikọta mbadamba mbadamba ndị nwere ogologo oge na njedebe. N'ikpeazụ, ha na-eme ka ụgbụ ahụ sie ike ma jiri ya kwadoro ya.
Buo etiti. A na-ejikọta elu n'elu ma chekwaa ya. Site na ala nke mgbidi jikọtara ya na obe, buru ụzọ kpochapụ ya na ogo nke ogo 30.
Ugwu spacers. Iji mee ka ụlọ ahụ dịkwuo ike n'etiti etiti ahụ, ọ bụla 30 cm nke spacer arụnyere. A na-egbutu nkuku na ogo 30. Ọkụkọ na-eji mgbasa ozi n'ụdị perch.
Ọkụ A na-ekpuchi akụkụ nke atọ nke etiti ahụ na mbadamba nkume. Nke a ga - ekwe ka nnụnụ zoo site na ihu igwe ma ọ bụ n'abalị. A na-agbanye mgbidi na mgbidi n'akụkụ ma chekwaa.
Iji nyere ụmụ nnụnụ aka ịrị elu, a na-echekwa ihe ndị na-agagharị agagharị.
Ọbụna obere ala, ma ịmara otú e si ewu pen maka nnụnụ, ị nwere ike ịmalite ịmalite ha. Ọbụna ụgwọ nri ga-akwụ ụgwọ n'ihi anụ dị ọcha na nsen ị nwetara. Gbalịa ya, ị ga-aga nke ọma.
Mara mma, na-esi ísì ụtọ, dịkwa mma. Ojiji o na-eji ogwu di iche iche eme ihe na omenala
Ụzọ na usoro iji luso Maybot larvae
Ndị na-ewu ewu n'etiti ndị mmadụ na ndị kwesịrị ekwesị maka mmepụta ụlọ - Cherry Shubinka